Date အပြီးမှာ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်နဲ့ ပြန်သွားကြတဲ့ Justin Bieber နဲ့ Hailey Baldwin
Date အပြီးမှာ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်နဲ့ ပြန်သွားကြတဲ့ Justin Bieber နဲ့ Hailey Baldwin တို့ စုံတွဲ
13 Jun 2018 . 11:50 AM
Justin Bieber နဲ့ အမေရိကန်မော်ဒယ်မလေး Hailey Baldwin တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ရေးကတော့ အရှိန်မြင့်သထက် မြင့်လာပါပြီ။ Bieber နဲ့ Baldwin တို့ဟာ VOUS conference တက်ရောက်ဖို့အတွက် Miami ကို ရောက်နေကြရာက Movie Date အပြီး အဂါင်္နေ့မှာ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်နဲ့ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့တုန်းက သူတို့အတွဲရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး ပြန်ထွက်လာချိန် Miami ကမ်းခြေမှာ မီဒီယာတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေက သတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်။ နှစ်ယောက်လုံးဟာ VOUS တံဆိပ် Sweatpants တွေနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ဝတ်ထားကြပါတယ်။
Miami မှာ တွေ့ရစဉ်
Miami မှာ ရှိနေတဲ့ တစ်ပတ်လုံးကတော့ သူတို့နှစ်ယောက် ကလပ်ကိုတူတူလာတာလည်းတွေ့လိုက်သလို ရေကူးကန်ဘေးနဲ့ ဝရန်တာတစ်ခုမှာ နှစ်ယောက်သားကြည်နူးနေကြတဲ့ပုံတွေကလည်း သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပလူပျံနေခဲ့ပါတယ်။
Hailey, Justin Bieber and John Shahidi leaving LIV nightclub in Miami, Florida. (June 11, 2018) @haileybaldwin @justinbieber @johnny #haileybaldwin #justinbieber
A post shared by Hailey Baldwin Updates (@haileybaldwincr) on Jun 11, 2018 at 9:59am PDT
သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အခုဆို ဒီတိုင်းခရီးတစ်ခုကို နှစ်ယောက်တူတူသွားရုံ အပျော် Date တာလား၊ လက်တွဲတွေ မြဲကြမှာလားဆိုတာတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရဦးမှာပါ။
Ref : etonline.com
Date အပွီးမှာ ကိုယျပိုငျလယောဉျနဲ့ ပွနျသှားကွတဲ့ Justin Bieber နဲ့ Hailey Baldwin တို့ စုံတှဲ
Justin Bieber နဲ့ အမရေိကနျမျောဒယျမလေး Hailey Baldwin တို့နှဈယောကျရဲ့ အခဈြရေးကတော့ အရှိနျမွငျ့သထကျ မွငျ့လာပါပွီ။ Bieber နဲ့ Baldwin တို့ဟာ VOUS conference တကျရောကျဖို့အတှကျ Miami ကို ရောကျနကွေရာက Movie Date အပွီး အဂါင်္နမှေ့ာ ကိုယျပိုငျလယောဉျနဲ့ ပွနျလညျထှကျခှာသှားကွတာကို တှခေဲ့ရပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျလာနတေု့နျးက သူတို့အတှဲရဲ့ ပုံရိပျတှကေို ရုပျရှငျကွညျ့ပွီး ပွနျထှကျလာခြိနျ Miami ကမျးခွမှော မီဒီယာတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေ သတိထားမိခဲ့ကွပါတယျ။ နှဈယောကျလုံးဟာ VOUS တံဆိပျ Sweatpants တှနေဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ဝတျထားကွပါတယျ။
Miami မှာ တှရေ့စဉျ
Miami မှာ ရှိနတေဲ့ တဈပတျလုံးကတော့ သူတို့နှဈယောကျ ကလပျကိုတူတူလာတာလညျးတှလေို့ကျသလို ရကေူးကနျဘေးနဲ့ ဝရနျတာတဈခုမှာ နှဈယောကျသားကွညျနူးနကွေတဲ့ပုံတှကေလညျး သတငျးမီဒီယာတှမှော ပလူပြံနခေဲ့ပါတယျ။
သူတို့နှဈယောကျဟာ အခုဆို ဒီတိုငျးခရီးတဈခုကို နှဈယောကျတူတူသှားရုံ အပြျော Date တာလား၊ လကျတှဲတှေ မွဲကွမှာလားဆိုတာတော့ ဆကျလကျကွညျ့ရှုရဦးမှာပါ။